Dzorera chimwe chinhu kunharaunda | Kubva kuLinux
nano | | GNU / Linux, Zvimwe
Usatombo kunetseka, ini handisi kuzotumira chero chinhu nezve mapikicha kana graphic zvinhu, Elav y Gaara ivo vanorairwa kuti vaite izvo (XD) ... Panguva ino ndinobata pamusoro wenyaya unoratidza kupfuura chero chinhu chipi zvacho, icho chekupa chimwe chinhu kunharaunda chakatipa zvakanyanya nenzira isina udyire, ini handidi kurira corny kana kuwedzeredza, asi ini ndinonzwa sekunge Zvakakodzera kutaura kuti Mahara Software, kupfuura GNU / Linux, yachinja hupenyu hweanopfuura mumwe, kusanganisira ini.
Usandirasise, hazvisi zvekuti ichi chakaita sechitendero kwandiri, asi zvachinja hupenyu hwangu hwekuyunivhesiti uye hwatungamira nzira yangu kumberi, zvakandiratidza kuti pane chimwe chinhu chinopfuura kushandira vamwe uye kuti iwe unogona kushanda pamwe vamwe uye kuti ini handidi kuti nditengese software yangu kuti ndiite mari, asi software yakanaka ichataura pachangu kupfuura mafuta kutangazve kuzere nezviratidziro ... Zvisinei, ichi ndicho chinhu chandaive ndichikurukura neshamwari, anoshanda akananga kurongedza zvinhu zviri muchimiro .deb, chinangwa chayo ndechekuita kuti zvive nyore kune vanhu vanoshandisa migove yakavakirwa pa Debian mapakeji, mitambo, zvirongwa izvo iye kana dzimwe shamwari zvavanogadzira uye zvinomutendera kuti awedzere, ndiye mumwe wevashandisi vane hanya chaizvo nekupa chimwe chinhu mukutsinhana nezvaanogamuchira, uye kuve Venzuelia zvakaoma kwazvo kupa madhora kune chero chirongwa , nekudaro izvo zvinogara zvichipihwa kurongedza, kuyedza, kuyedza uye runyorwa rurefu rwezvinhu (shandisa bazi senguva dzose chiteshi sid de Debian uye kazhinji uchimhan'ara bug yega yega yainowana). Uye zvechokwadi, ndiyo kesi yemunhu shamwari yangu (Ndiani wandisingataure nezita sezvo ndisingazive kana ndichidaro, ndiregererei izvo) uyo anonzwa kutenderedzwa nekutenda kwavo kuita izvo zvavanoita, asi kwete tese tinogona kana kuda kuzviisa isu pachedu Debian uye chinja source.list kuti ushandise sid, vamwe vedu tinoshandisa Mint, Ubuntu, Arch, Slackware, Suse, nezvimwe, nezvimwewo, nezvimwe ... Mukati mehurukuro, mubvunzo wakareruka asi wakadzama unomuka maererano nemusoro wenyaya:
“Chii chatingaite kudzorera chinhu kunharaunda iyo yakatipa zvakawanda kudaro? Waizoitei?
Handina kutora sechirwere pachiso changu kubva "Ndinoita uye iwe haudaro"Asi sekumuka kwekumuka, chimwe chinhu chakanangana nekufunga imwe nzira yekubatsira avo vakandibatsira uye apa ndipo panopinda zvinhu zvakakura zvezvinhu zvatingaite. Ini, yemahara software uye GNU / Linux Ivo chaivo yunivhesiti yangu, ini ndinodzidza zvakananga kubva kune vamwe 'mapurojekiti, kubva kune avo vakagovana tutorials, kubva kumavhidhiyo avo, kubva mukukanganisa kwavo, kuraira pamazita ekutumira, zviitiko nezvimwe. Maitiro angu ekudzosera kune zvese izvi ndere kuburitsa kodhi yemitambo yangu, ini pachangu ndanga ndichigadzira runyorwa rwezviitwa zvekuita mukati Python, nemienzaniso nevamwe. Ini ndinoshandawo pazvidzidzo uye ndiri kuisa zvinhu pamwechete zvidimbu zvidimbu ndobva ndazvisunungura (in the foramu yenharaunda ino, zviya), Ndinonyora pano, nekuzvidira uye nemaonero angu kuitira kuti munhu wese azvipe mazano ezvavanogona kuita (kana vachida) kubatsira nharaunda yese. Ini ndinotarisira kugadzira software yeangu andinofarira desktop nharaunda uye nekudaro ndinoizadzisa, uye ndiani anoziva zvimwe zvandinogona kufunga nezvazvo. Chinhu chega chandisingakwanise kuita, kana chakanyanya kundiomera, kupa mari, kwete nekuti ini handidi, asi nekuti zvinondibhadhara chaizvo uye zvinondibhadharira zvakawanda.
Asi, hongu, havazi vese vanogona kupa mari kana asiri munhu wese ane ruzivo rwechirongwa, vamwe vagadziri, vamwe vanyori, vamwe vanongova chero chimwe chinhu chezviuru zvezvinhu zviripo munyika ino, asi isu tese tine SWL yakafanana uye kuti tese tinogona kupa chimwe chinhu, kunyangwe chiri chidiki, asi isu tinogona.
Kana iwe uri mugadziri, wobva wagadzira dhizaini mune emahara mafomati, ese ari maviri akazara uye akaturikidzana, nezvimwe, kuitira kuti vamwe vatore mukana wavo. Gadzira desktop ekushongedza mapakeji, shandira pane zvigadzirwa zvemapurojekiti, kune chero chinhu.
Kana iwe ukanyora wojoinha blog, nyora rako basa uye urisunungure, dzidzisa vamwe kushandisa maturusi aunoshandisa, dzidza zvakawanda uye dzidzisa zvimwe ...
Edza iyo alpha, beta, RC shanduro. Tumira zvidhoma kune vanogadzira.
Kana iwe uchiziva nezve chimwe chinhu, pfuudza iyo ruzivo, ndizvo zvinoita nyika ino yese nezvayo, kudzidza, kugovana uye kukura. Zvandinoita nhasi zvichashandira mumwe munhu mangwana, zvichingodaro.
Vanhu, izvo zvinokwanisika zvinogumira chete nechido chedu chekuita chimwe chinhu uye zviri nyore kudaro, ini ndakazvarwa kuti ndiite zvandinoita uye ndinozvifarira, kwete kuti ndiri muTaliban, hippie, muroti kana murombo; Ini ndinorarama hupenyu hwangu uye ndinotora nhanho kumberi senge ramangwana remakomputa nyanzvi, asi runako rweizvi nderekuti hazvisi chete zvemacomputer masayendisiti, asi kune chero munhu anoda kunakidzwa nechakasiyana, izvo vamwe vasina, bata munhu ari mukati izvi zvese zvakatikomberedza uye nekunzwa kuti hapana munhu achazokusiya nenzira yakaipa, kuti munhu wese ari kuzama kukubatsira nepavanogona napo, kuti hausungirwe kuita kana kugadzirisa chimwe chinhu.
Ini ndinofunga pane zvimwe zvekutaura, zvinongofanirwa kuyedzwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » GNU / Linux » Dzorera chimwe chinhu kunharaunda
Kufanana neCuba? Umm kuda kuziva sei ini handioni kufanana, zvakanaka murume akwegura iwe uri pachokwadi mumashoko ako, semuenzaniso handizive maitiro (uye kuda kudzidza), asi kubva zvandanga ndiri kuyunivhesiti ndakagovana Linux nevakawanda uye vazhinji vanhu vanonditenda ini ndisingatoziva kuti iriko, saka zvakare pandinogona ini kuyedza miedzo yeshanduro.
Saka isu tese tinofanirwa kugovana pfungwa iyoyo, ndiri makanika, ndinoda kudzidza zvemacomputer science asi kunyanya nekuda kwekushayikwa kwenguva ini handina kukwanisa, munguva pfupi iri kutevera.
@nano yakanaka kwazvo chinyorwa uye pamusoro pezvose kufunga kwayo i + 1 ...
Kuratidzira kukuru uye kwandinogovana.
Ini ndinonyora nguva nenguva pane yangu blog, ini ndine akati wandei mapurojekiti uye ese ari pasi peGPLv3, angu mapikicha uye mamwe graphic anoshanda pasi peCreative Commons. etc.
Ndinoda kubatana zvakanyanya, asi zvinosuwisa kuti chikamu changu cheChirungu hachina kunyanya kukwirira, izvo zvinonditadzisa kune imwe nhanho kubva mukubatana kana kuzivisa madudu.
Mwedzi unotevera ndichave ndiri muLinux nyika kwemakore matanhatu, uye ndinovimba pachave nevamwe vakawanda uye vachishandira pamwe ^ ^
Ini ndinoburitsa zvidzidzo nguva nenguva pane yangu blog, kunyangwe kana isiri nzvimbo yakatsaurirwa zvachose kuLinux. Ini ndinofunga vanobatana mushe pamwe nekuratidzira kwandinoita nezve nzanga, hunyengeri capitalism, nezvimwe. Sezvo GNU / Linux iine divi rinoreva chaizvo zvakasarudzika tsika, uye mazano nezve kufambira mberi kwandinobvumirana nazvo, ndinofunga kuti kuvepo kwaro pane yangu blog hakunganzi kwakakodzera.
Kana ndangodzidza chimwe chinhu chingave chinobatsira kune vamwe, ndinopinda uye ndochiposita, ndakatsanangura poindi nepfungwa. Dai ndaiziva maitiro echirongwa ndaizozvipira pachiri, asi sezvandakambotaura mune kumwe kunyorera pane ino peji, yega yega inopa izvo zvavanoziva.
Yakanaka kwazvo uye inofungisisa chinyorwa.
Handina hunyanzvi hwekuronga. Zvandinoita kududzira zvirongwa muchiSpanish uye ndine akati wandei mapakeji mu archlinux aur
Ndichapa maonero angu. Kana ini ndagara ndichijeka nezve chimwe chinhu, ndechekuti ndinovenga kushanda uye zvinondinetsa pavanondikumbira kuti ndiite zvinhu. Kufunga izvo zvandambotaura kana ndikaita basa rakareruka, ini ndinoronga software yakapusa, ndinoiburitsa pasi peBS kana gpl, asi kana ndine basa rakanditorera maawa nemaawa, kwegore, saka Ini ndinoiburitsa pasi pechairi rezinesi kana pasi pemubhadharo mudiki, ini handina kushandira mahara kune chero munhu uye uku hakuzove kutanga kwayo.
Uchaona kuti kana huku inopisa ikakuudza, unoshandira mahara haha
Pakadaro, isu tichafanirwa kufunga nezvazvo nokungwarira XD.
Kana zvakare nekuti iwe uchinzwa senge, ivo havafanirwe kukuudza iwe chimwe chinhu.
Ini ndanga ndatogara ese maviri kesi, kunyangwe mune imwe yacho tete vacho yaive yakashata ironing board ine matohwe maziso, asi iwo aive akakonzera makuru haha
Kana mukadzi wechiJapan akazvitaura, anozviita asina kufunga.
Kurudyi, pandev92 ine kuravira mudhongi
Uyo anadzo mudhongi ndiwe, mukomana mudiki XD
Wanga uri kuzoshamisika
Ostia Kushinga kuri kushandisa Ubuntu!, Iyo iri kuzokungurusa xD
Max 6.0 mubazi
Wese munhu ane maonero ake pane izvi.
Ini handishande mahara futi, asi izvo ndezve basa chairo chete, ini handisi musayendisiti wemakomputa uye zvandiri kuronga zvandinoita sechinhu chekutandarira, kwete kuwana mari kana chero chinhu (kunze kweizvozvo, mumwe munhu anoda kundibhadhara kugadzira chirongwa)
Ini ndicharamba ndichiburitsa mapurojekiti angu ese, kunyangwe vakatora maawa, mazuva, vhiki, mwedzi kana makore.
Zvakanaka, neicho chirevo urikungoratidza chete kuti iwe unoziva zvishoma nezve yakasununguka tsika uye yemahara software, sezvo uchiri mumusoro mako iyo programmage yemahara software = inoshanda mahara, yakajairika muyakavanzika "nyika".
Zvinoenderana nemamiriro ezvinhu, dzimwe nguva kuti uwane ruzivo unofanirwa kushandira mahara kana nemari shoma.
Kune vamwe vanhu vanoita zvinhu zvekunakidzwa kana rubatsiro, vachishanda maawa marefu kuti vagutsikane pachavo.
Zvakare, nekuti chirongwa ichi chiri chemahara hazvireve kuti hachisi chekuita purofiti, yemahara haina kufanana neyemahara, zvinhu zviviri zvakasiyana.
Ndiri kuona kuvandudza Mahara Software sekudyara mune ramangwana. Izvo zvakanyanya kuoma chirongwa chaunogadzira, iwe unounganidza hunyanzvi hwakawanda, iwe unodzidza yakawanda mitauro yekuronga, hautombonyora chero chero kodhi nekuti yakawanda yekodhi iwe yaunoshandisa muzvirongwa zvako inogona kutorwa kubva kune mamwe mapurojekiti, iwe famba nekukurumidza, uye unogona kusvika ipapo kusvika apo hunyanzvi hwako hunobvumidza iwe kuva kernel-level masystem programmer, uye izvo zvinokwezva kwazvo kumakambani mazhinji.
Semubati wegadziriro yesoftware, pane kudaro, hauzokwanise kutora kodhi zvakasununguka uye kazhinji uchafanirwa kuita zvese kubva pakutanga, kuve neruzivo rweimwe ruzivo iwe yauchazofanira kubhadhara, uye mazhinji acho achiri iwo icharambidzwa, pasina mukana wekupfuurira mberi kupfuura zvinotenderwa.
Pane mutsara wandinoda, uye ini ndinofunga unonyatso kuratidza zvazvinoreva kugadzira Mahara Software uye ndiko kuti kuvandudza Mahara Software kwakafanana nekumira pamafudzi egiants. Nhasi ndinotanga kubva pasi zvakanyanya, asi mangwana ndinogona kunge ndiri kumusoro pamwe nevakuru.
Kune rimwe divi, vanogadzira software vanogaro tanga nekupedzisa pahuriri hwakafanana hwepiramidhi pavakaiswa, pamwe vachifamba nedivi, asi vasingambokwira kumusoro kana kudzika.
Kune rimwe divi, ini ndinogona kutaura iwe mazhinji akabudirira Mahara Software mapurojekiti uye uko vagadziri vavo vasiri kufa nenzara, semuenzaniso: Iyo Blender chirongwa, KDE uye Gnome vanogadzira, Linux kernel vanogadzira, Debian vagadziri, RedHat uye Canonical makambani, uye akati wandei mamwe.
Kuwana mari hakunei nekugadzira Mahara kana proprietary Software, kuwana mari kunoenderana nekuziva maitiro ekuita bhizinesi rakanaka.
Kana kunetsekana kwako kuri kuwana mari neFree Software ipapo unogona kushandisa kurodha kuchaja system, iwe unoshandisa yakavanzika kodhi repositi, uye kana mushandisi achida kurodha pasi chirongwa chako vachatanga vabhadhara, uye pavanodaro, ivo gamuchira zvese chirongwa uye nekodhi kodhi uye rezinesi remahara.
Zvakanaka kutaura, mazwi ako abuda chaizvo hama… Makorokoto 😉
Ini ndapa kune iyo Slackware Linux nharaunda nekugadzira SlackBuilds uye nekuvaisa iwo kune iro peji rerojekiti. Izvo zvakafanana nekupakata software, kunze kwekuti iyo yakaunganidzwa pasuru haina kuunzwa, asi pane yakarongedzwa script, nenzira iyi mushandisi ane simba rakawanda pamusoro pekuti ndeapi mireza yekuwedzera kana kubvisa kana kuti ndeapi mapurani ekunyora kuvandudza mashandiro, nezvimwe. 🙂
Yakanaka nano, yakanaka… ^^
Chaizvoizvo chinhu chimwe chete icho ini chandinofunga, kupa, kudzidza, kuteerera uye kugovana. Ndo izvo zvinonyanya kukosha pano.
Kufungisisa kwakanaka, kwaziso.
chinhu chakapfava asi ini handifunge zvekuchaja. Muchokwadi, nhasi mahara maapps ndiwo anonyanya kukosheswa uye ini ndinoshanda mukusimudzira webhu saka zvandino ronga ndega ndezve kungoda rudo rwezvandinoita. Ikoko munhu wese anoda kutengesa software yake, pakupedzisira ivo vanogara vachizvitsemura nekugadzira kurasikirwa, ini pachangu ndakawana mabasa madiki ekuratidza kodhi yangu. Well for I saw Pandev I hope you get paid nekuti handina kupihwa XD
Ini ndinokubhadharira izvo zvaunoda XD, semuenzaniso iyo minitube yekuvandudza inotengesa iyo vhezheni yeOSX uye inokosheswa kwazvo, kunyangwe ikadhura nezve € 10. Kana vakakutsemura iwe, tsime, hapana chinoitika, pachagara paine munhu anopedzisira abhadharira chirongwa ichi, kana ukachiisa mahara, vanhu vajaira kusapa nekuti vanoti * zvakanyanya chimwe chirongwa chiri nani , sei ndichienda kunopa kune uyu *. Ini handizotsaurire hupenyu hwangu mukugadzira software, asi kana ndikagadzira imwe, kana ndashandisa anopfuura mwedzi mitanhatu ndichishanda, usazvidya moyo, ndichaibhadhara hongu kana hongu xD.
Ini pachangu ndakatanga kunyorera blog (yeimwe) nezve LMDE. Ini zvakare ndoda kududzira iyo LMDE bhuku riri pane iyo altervista saiti muSpanish.
Sekutaura kwakaita vamwe vatinoshanda navo, haufanire kunge uri programmer kuti ubatsire (ndine ruzivo rwehurongwa hwakawanda, asi ini handizvione semunhu akaronga zvakanaka).
Zvakare, muchokwadi mune zvimwe zviitiko zvinopa zvakanakira imwe, ini ndichaenzanisira nemimwe mienzaniso yako wega:
Paive nenguva iyo, zvirinani sekufunga kwangu, iyo LXDE dudziro yakasiya yakawanda yekuda, uye ini ndakaona kuti mushure meimwe shanduro zvinhu hazvina kuvandudzika, saka pachinzvimbo chekumirira, ndakafunga kuita mutsauko pachangu: ndakasaina kumusoro semuturikiri, ndakaita zvigadziriso kushanduro yaivepo ndikadudzira zvese zvitsva, zvakabatana nevamwe vashanduri kupereta, girama uye kuenderana kwekuongorora pakati pemamojuru, uye kuyedza kwangu kwakakomborerwa munzira nhatu dzakasiyana:
Chekutanga pane zvese, LXDE ikozvino ine dudziro yeSpanish iyo inoita senge inogamuchirwa kwandiri (kunyange zvisiri hazvo kukwana), izvo zviri pachena kuti hazvina kubatsira kwete ini chete, asiwo vamwe vese vashandisi vanotaura chiSpanish vanotaura LXDE.
Chechipiri, ini zvino ndinowoneka mumakodhi emamojimendi anosanganisira iwo, saka ichi chave chikamu chedzidzo yangu.
Yetatu, kukomba kwangu uye kutsungirira mukushandurwa kweprojekti kwakaita kuti varongi vechikwata chekushandura vandipe mvumo yekutungamira neyekubatanidza (izvo zvandisina kumbonyatso fungira).
Zvinotyisa, kunyangwe ini ndichiri kupa kuchirongwa, kwenguva yakati ndanga ndisina kushandisa LXDE, asi GNOME (kuburikidza neLMDE)
Mumwe muenzaniso wakaitika kwandiri nechirongwa cheLDAP Account Manager, sezvo ini ndakaona zvimwe zvikanganiso mushanduro yaivepo. Ini ndakatumira anovandudza vhezheni yakagadziriswa uye akandiudza basa riri nani padudziro yeiyo inotevera vhezheni, iyo yaibuda. Ndakadaro uye sekuremekedzwa akanditumira iyo yehunyanzvi vhezheni yemahara.
Kunze kwemienzaniso iyi, pandinogona ini kubatana pamwe nezvimwe zvinhu zvidiki asi zvinopa tsanga yejecha, kungave iko kuburitswa kwemashoko eblog rimwe chete iri, kana mamwe mazano eboka reNOVA (iro randakazoona kuti vamwe vane kunyange kuva muzvinyorwa zvetsananguro), nezvimwe.
Zvakanaka, ini zvakare ndinotora chikamu semurongi weGUTL, uye maneja / moderator / mupepeti wemamwe emasevhisi ayo aanopa, pamwe nekubatsira nezvinyorwa, pandinogona.
Tsika: kuve programmer hakuna kukosha kuti udzore kunharaunda.
Kwakanaka kuratidzwa \_ O / Ini handisati ndave mukurumbira programmer, asi isu tiri munzira yekuzviita xD panguva iyi ini ndinoparadzira kushandiswa kwemahara software kune chero munhu anoyambuka nzira yangu.
Muchokwadi kuyunivhesiti yangu vanondidaidza "Mahara-murume" nekuda kwerudo AJAJAJAJAJAJAJAJA asi ini ndakato kwanisa kutora shamwari dzangu ina pasi pechikwata che ubuntu xD kunze kweuyo akashanyira ksa yangu ndokundiona linux mint ndokuona kuti zviri nyore sei ndaiita zvese ndisina kuisa hapana kana chinhu ahahahahaha
Zvisinei hazvo mega kwaziso 😉
Ini ndinoremekedza maonero evamwe, asi ndinotenda kuti kana zvakakodzera kudzosera chimwe chinhu icho nharaunda chatipa kwatiri, munzira dzakawanda uye hongu, dzimwe nguva (kana zvisiri zvakanyanya) iwe unongoona dzimwe nzira dzekugadzira dzekupa nharaunda, kunyangwe Ndinoziva chimwe chinhu nezvechirongwa (sekunge chero mudzidzi weinjiniya) ini handizvitonge nekure, kana dhizaini saka ndinoita zvandinogona, ini ndinopa ruzivo rwangu rudiki mumaforamu nezvandakagona kudzidza zvakafanana nzira muirc (mune yangu Mint uye Ubuntu) uye munguva pfupi ndichave mugadziri wemahara software muFLISOL ichaitika muguta rangu. Kune nguva dzose nzira, uye dzakakosha.
Ini chete ndinoita kunyunyuta x_X
Kana zvizvarwa zvedu zvikasadzidza kuva nemutsa, uye nekugovana ruzivo, ngatirege kutarisira kuti vamwe vazviitire isu.
Saizvozvowo, hapana anozviita, ndine chichemo chakavhurika mu tomahawk bugtracker nezve manejimendi enziyo dze spotify, uko zvinongokuratidza makumi maviri, hazvo, chimwe chinhu chingadai chakagadziriswa mumaawa maviri, zvinotora mwedzi mina uye pasina mhinduro.
“Chii chatingaite kuti tidzorere kunharaunda yakatipa zvakanyanya? Waizoitei? "
mmm ... tenga mukombe wangu wekofi kuchitoro chevanhu ... e '
PS: Yakanaka posvo, yakanaka kwazvo
Ndanga ndichida kudzidza imwe Python neGTK kwenguva yakareba, kuti ndiite chimwe chinhu senge yakabatana sarudzo pani yeLXDE, izvo zvinokuitira zvakanaka… Pamwe inguva yekutanga.
Vazhinji vanofunga nenzira imwecheteyo, uye zvakanaka kuti urwu rudzi rwechinyorwa rwakaburitswa pano chinojekesa zvimwe zvisingazivikanwe. Kufanana nevazhinji, ini handisi mugadziri, ndinoifarira uye inodaidzira kutarisisa kwangu, ndiri kudzidza python, asi handikwanise kutaura kuti ndinogona pazviri. Kunyange zvakadaro, ini ndiri weboka revashandisi vegnu / linux, uye ndinonzwa kuti basa rinoitwa rakanaka kudzorera zvishoma zvishoma zvatakapihwa. Kuparadzira ibasa redu, kubvisa kumeso kubva kune vamwe vanogara vachifunga kunyangwe mumazuva ano apo Linux yatove kushandiswa zvakanyanya, zvinova zvevanyanzvi, izvo zvisiri zvechokwadi zvachose. MunaEpril isu tichava neFLISOL chiitiko (Latin American Festival yeFree Software Kuisirwa) uko isu tichazvipa isu iro basa rekuparadzira zvakatowanda!
Zvekare Makorokoto kune avo vanogadzira "desdelinux", basa rakanaka.
Ndiri kuronga iyo FLISOL yeguta rangu neiyo yemuno Mushandisi Linux Boka, saka ndatoita basa rangu rechikoro xD
Ndiri mugadziri weJava, ndisati pro: p, ndakaedza kugadzira chirongwa chingaite .desktop mafaera ayo anoshanda seyebuntu mifananidzo.
ichine kukanganisa kwayo. Ndakaedza zvakare kugadzira timu yekushandura yemagazini yeubuntu, asi hapana munhu wemunharaunda medu akashinga. Ndinoda kupa chimwe chinhu asi ikozvino ndapfupika nenguva.
ndine urombo necaptphrase
gadzira chirongwa chinogadzira mafaera
Chinyorwa chakanaka kwazvo.
Muchokwadi, chinyorwa pachacho inzira yekupa, nekuti inoparadzira ruzivo rwemahara SW uye sei uye nei ichikura.
Uye kubva pakuratidzika seizvi, bhurogu yangu yakazvarwa, inova nzira ine mwero yandinoedzawo kupa chimwe chinhu kunharaunda.
Neye terminal: Mienzaniso ine Tsvaga raira